योग्यता / जगदीश घिमिरे | Online Sahitya
साँच्चै नै उनमा योग्य नेताको नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता, योग्य प्रशासकको निर्णय दिन सक्ने दक्षता, योग्य व्यवसायीको वातावरणको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर तदनुरुप कार्यसिद्ध गर्न सक्ने कार्य-कुशलता, योग्य बुद्धिजीवीको देश काल परिस्थितिको गहन अध्ययन गरेर काम निकाल्न सक्ने पात्रता - सबै थोक छ उनमा । त्यसमाथि उनको सबैसंगको व्यक्तिगत सम्बन्ध कति सुमधर छ भने कसैले पनि उनीले भनेको कुरा काट्नै सक्तैनन् ।
कुनै पनि समाज के कस्तो छ भन्ने कुरा त्यस समाजका नेताहरू, प्रसाशकहरू, व्यवसायीहरू र बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक-नैतिक-चारित्रिक स्तरमा ज्यादै नै भर पर्दछ । यिनीहरू समाजका अगुवा हुन्छन् । यिनीहरूको कार्यकलाप समाजको लागि अनुकरणीय आदर्श हुन्छ । ती हाकिममा त्यस एकादेशको समाजका ती सबै वर्गहरूको चारित्रिक विशेषताहरूको योग थियो - उनी ती सबैका मानस-प्रतिनिधि थिए, प्रतीक थिए ।
कसै कसैमा योग्यता मात्र हुन्छ - तर जस पाउने भाग्य हुँदैन । उनी भाग्यमानी पनि थिए । देशले उनको योग्यताको कदर गरेको छ । उनले जागिरमा सदैव उन्नति गरेका छन् । सानै दर्जादेखि शुरु गरेका हुन् - ठूलो ओहोदामा पुगिसकेको छन् र एकादेशको प्रत्येक महत्वपूर्ण पाइलामा उनको विचारको कदर गरिन्छ । त्यसैले, पहिले त निकै साधारण औकातका मान्छे भए पनि अहिले निकै प्रगति गरिसकेका छन् - स्वाभाविकै हो ।
दुर्गम जिल्लाको चाँडै विकास होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले नै हो, उनी जस्ता सुयोग्य हाकिमलाई राजधानीभन्दा टाढा रहेको अल्प विकसित जिल्लामा सरुवा वढुवा गरिन्छ । मान्छेले ठाने - त्यस जिल्लाको भाग्य चम्कियो ।
सर्वेक्षणको विश्लेषण र निष्कर्षहरू ज्यादै तर्कसंगत हुन्छन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो जीवित रहनु - जसपछि नै अरु कुनै समस्या हुन सक्छ । ठिक - ढंगले बाँच्न सन्तुलित भोजन अनिवार्य छ । अतः पहिलो पाइलो हुनपर्दछ - कुपोषणको अन्त्य गर्नेतिर प्रयास ।
कुपोषणको अन्त्यपछि जीवन रहन सकिन्छ, तर अज्ञानरुपी अन्धकार छउन्जेल ठीक ढंगले बाँच्न सक्नु असंभव छ । यो अज्ञान हराउन शिक्षाको व्यापक प्रसार चाहिन्छ - यस्तो शिक्षा जसले सुन्दर जीवन विताउनका लागि चाहिने ज्ञान-सिप सबै देओस् ।
फेरि, जानेर मात्र हुँदैन - जानेको कुरा व्यवहारमा कसरी उतार्ने ? त्यसमा अवरोध हुन्छ - गरिवी । साधन-सम्पन्न नभैकन ज्ञानको पनि अर्थ हुँदैन - त्यसका लागि उद्योग व्यवसाय हुनुपर्यो, संचार-यातायातका माध्यमहरूको विकास हुनुपर्यो, आदि आदि ।
उनको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यसरी समस्याहरूको अन्तस्रम्बन्ध र प्राथमिकताहरूको प्रशस्त विश्लेषण गरिएको हुन्छ । पढ्दा लाग्छ - उनी साँच्चै प्रतिभावान शोध-प्राज्ञ हुन त स्वाभाविकै थियो - जागिरका यतिका वर्षमा उनले विश्वका सबैजसो प्रमुख देशहरू - अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, सोभियत संघ, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, आदिमा विभिन्न तालिम-उपाधि हासिल गरेका थिए एवं अनेकानेक कार्यशाला-गोष्ठीहरूमा अत्यन्त सक्रियतापूर्वक सफल सहभागिता गरेको थिए ।
तर उनी प्रमुख शोध-प्राज्ञ मात्र नभएर एक सुयोग्य व्यवस्थापक पनि थिए, जसलाई थाहा थियो - असल व्यवस्थापकले समस्या मात्र होइन समस्याका व्यावहारिक समाधानहरू पैल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
समाधान योजना तीन तहको थियो - (क) प्रायोगिक (पाइलट प्राजेक्ट), (ख) जिल्ला स्तरीय र (ग) राष्ट्रव्यापी योजना जुन राष्ट्रिय स्तरमा संचालित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
प्रतिवेदन स्वीकृत हुन्छ । प्रायोगिक योजनाको काम शुरु हुन्छ । माछा पाल्ने पोखरीको नाउँ हुन्छ - विकासे पोखरी । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुहुन्छ । अखबारमा उहाँले कोदाली लिएको तस्वीर छापिन्छ । उद्घाटन भाषणमा उहाँले भन्नुहुन्छ - जसले विकासे पोखरीको विरोध गर्छ, त्यसको टाउकोमा मृत्युको घण्टा बज्ने छ ।
हाकिमलाई अब त सास फेर्ने फुर्सद पनि हुँदैन । यसै त व्यस्त मान्छे । विकासे पोखरीको काम जोडतोडले चलिरहेछ । राजधानीबाट टाढा पर्ने भए तापनि त्यहाँको प्रत्येक गतिविधिमा राजधानीले चाख लिएको छ । विकासे पोखरीका सबै विकासक्रमको राजधानीमा तुरुन्त खबर हुन्छ - प्रगति प्रतिवेदनद्धारा ।
जिल्लाबाट प्रगति प्रतिवेदनहरू बस्रन थाल्छन् - योजना अनुसार विकासे पोखरी निर्माणस्थल वरिपरिको जग्गा अधिग्रहण भैसकेको छ । खन्ने काम जोडतोडसँग चालू छ । काममा लक्ष्यभन्दा वढी प्रगति भैरहेको छ । खन्ने काम समाप्त प्राय भैसक्यो । हाकिम साहेब विकासे भुरा लिन समुद्रपारि जानु भैसक्यो उहाँले आफ्नो साथमा थरि थरिका विकासे भुरा लिएर आइसक्नुभयो । विकासे भुरा पोखरीमा छोडिए भुराको बडो राम्रा विकास भैरहेको छ ।
तर अन्तिम प्रतिवेदनमा बज्रपात हुन्छ - एकाएक विकासे भुरामा महामारी रोग फैलियो । सकेसम्म औषधोपचार गर्दा गर्दै पनि सबै भुराहरू मरे ।
तथ्यको अध्ययन गर्न एक जना उस्तै कहलिएका सुयोग्य हाकिम जान्छन् जो माछा पाल्ने सम्बन्धमा प्रख्यात प्राविधिज्ञ पनि हुन् । उनले राम्ररी अध्ययन गर्छन । पहिले त उनी जिल्लावासी योजनाकार हाकिमको कुरासँग सहमत हुँदैनन् - तर पछि दुवै जनाको कुरा मिल्छ । राजधानीबाट अध्ययन गर्न जाने हाकिमले यथार्थ वस्तुस्थिति बताउँदै आफ्नो प्रतिवेदनमा के लेख्छन् भने सो घटना भवितव्य हो - यसमा कुनै व्यक्ति विशेषको दोष छैन । यस योजनाका योजनाकार तथा संचालनका जिम्मेवार हाकिमले मरीमेटी मेहनतापूर्वक काम गरेका हुन् । यिनको सेवा तथा योग्यताको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुनेछ । अन्त्यमा, आगामी वर्षमा विशेष औषधी आदिको व्यवस्था गर्न रेगुलर बजेटका अतिरिक्त वढी दुई लाख प्रचलित मुद्राको निकासा दिने सिफारिस गरिएको हुन्छ, जुन सदर हुन्छ ।
जे हुन दुःखद घटना भैसकेको थियो । वितेको कुरामा दुःख मानेर समय बिताउनु बुद्धिमानी थिएन । आफ्ना हातमा वर्तमान मात्र हुन्छ - जसको सदुपयोग गर्न जान्नुलाई नै योग्यता भनिन्छ । त्यसैले हाकिम झन वढी निष्ठा र सक्रियतापूर्वक काममा जुट्छन् ।
तर दैवको इच्छा मान्छेको भन्दा बलियो हुन्छ । दैवको इच्छा अगाडि हाकिमको केही लाग्दैन । दोस्रो वर्ष पनि हुर्कन-हुर्कन लागेको बेलामा बज्रपात पर्छ - सारा माछा रोगले स्वाहा हुन्छन्, एकै चिहान हुन्छन् ।
यस वर्ष पनि उसै गरी जाँचकी आउँछन् - पोहोरको भन्दा झन् ठूला हाकिम - झन् ठूला प्राविधक विशेषज्ञ । पोहोर जस्तै दुई हाकिमहरूका बीच पहिले मतैक्य भएको हुँदैन - पछि हुन्छ । पोहोर जस्तै जाँचकी हाकिमले अध्ययन प्रतिवेदन दिन्छन् र यसपाली झन् विशेष पूर्व सावधानीहरू औषधोपचार व्यवस्थापन आदिको लागि रेगुलर बजेटमा चार लाख प्रचलित मुद्रा थप गर्ने सिफारिस गर्छन, जुन सदर हुन्छ ।
माछा पाल्ने योजना त उत्कृष्ट छँदै थियो । कारण विशेषले एक ठाउँमा असफल हुँदैमा योजना नै पन्छाउने प्रश्न नै थिएन - यो मूर्खता कसले गर्ने ?
विकासे पोखरी सम्बन्धी भित्री काम गर्ने एक दुई जना, महामारीको कारण जाँच गर्न आउने विभिन्न टोलीका सदस्यहरू बाहेक अरु कसैलाई पनि कहिल्यै यो थाहा हुन सकेन - विकासे पोखरी केवल कागतमा खनिएको थियो, धर्तीमा होइन ।